Ny kitapo fananganana lakozia alika China - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Kitapo fidiovana aluminium
Quick Details Grade: 1000 Series Misafoaka: O-H112 Type: Plate Fampiharana: hisainana Sign Boards, Road Furniture, fanaka, Sand mpamosavy Ambany hatevin'ny: 0.36 - 4.0mm Ambainy: 100 --1200 MM tena toetrany Fitsaboana: mifono firaka na tsia: Moa Alaina: 1060-1060mm Al Content (%): 400 cookware / lakozia ampiasaina: fampisehoana an-dàlam-peo & spinning fanesorana Usag Tensile strength: (MPa) ≥800 Pulver na tsy: Tsy misy vovoka tsy misy pentina: môlea vita, madio, matevina, tsy misy volombava, tsy misy ratra, tsy misy okididana Fitsaboana: kalokalo mihodina sy mafana. Sample: alimento alimentaire alimentaire alimentaire MOQ: 99.95 TONS alemana circle circuits Description: Applications of circle aluminium. .
Sary miloko matevina misy alim-boloky vita amin'ny alimo vita amin'ny alimo
Quick Details Grade: 6000 Series Misafoaka: T3-T8 Type: Plate Fampiharana: Decoration hateviny: 0.2-200mm Ambainy: 500mm-2800mm tena toetrany Fitsaboana: mifono firaka na tsia: Moa firaka Model Number: 1050,1060,2024,3003,5083,5086,6063,6061,7075 Product name: lalina nahatan-anodized bary farany fihodinana aluminium boribory kapila tena toetrany: Brush.and Blast.checkered.embossed Material: Aluminum firaka Metal Color: Aluminum Color Certification: ISO9001 endrika: Flat Plate firaka: 1000 / 3000 / 5000 / 6000 / 8000 entam-barotra name: Alluminium Plate Malagasy: GB / T3880 ASTM B209 Fampiharana sy famenoana ny sary sokitra matevina amin'ny alàlan'ny endriky ny alimo vita amin'ny alimo vita amin'ny alimo 1. Ireo tranga voatahiry amin'ny raharaha hazo 2. peta-taratasy 3. fanangonana plastika 4. Foam packaging Package araka ny fangatahan'ireo mpanjifa na vokatra atolotra.
Taratasy fohy: Amin'ny maha-mpamatsy fototra ny Aluminium Circle, dia vita avy amin'ny alimine madio ary ampiasaina amin'ny cookware sy ny engineering, toy ny mahandro sakafo, tanjona mazava, cooker, frypan, tavoahangy, ketla, reflector ny hazavana, sns. Manintona sy manatsara ny endriky ny kalitao Aluminium Circle Sheet azo omena. Ny Circumference Aluminium dia ny RoHS ary ny fanarahan-dalàna REACH ary ampiasaina amin'ny famokarana voaaro tsara. Ny faribolantsika dia fitaovana tena tsara ho an'ny famokarana fitaovam-pihinanana, fitaovana, vilany, kitay sy kesika. Karazan-tsakafo: Famaritana: Toetoetran'ny alim-borona aluminium dia ampiasaina betsaka amin'ny serivisiana, Fandefasana sari-tany momba ny làlam-pitaovana, Fandefasana banga Aluminium no fitaovana mahazatra indrindra ho an'ny cookware, satria izy io dia ...
Famaritana: Ny vidin'ny alimo manodidina ny vidin'ny sakafo fitaovana: Amin'ny alàlan'ny fanampian'ny matihanina manam-pahaizana, azonay natao ny manamboatra, manolotra sy manondrana alim-borona tsara tarehy. Ny faribolan'ny alim-bary natolotr'i antsika dia nanamboatra aluminium avo lenta sy alim-pitandremana mba hitoetra ho tandindomin-doza miaraka amin'ireo fenitra sy rafitra indostrialy. Noho ny endriny toy ny faharetany, ireo mpanjifany aluminio dia ankatoavin'ny mpividy. Ny kofehy alimina: 1100 1050 1060 3003 5005 5052 ny hatevin'ny kofehy aluminio: 0.2mm-4mm isaky ny boribory alimina: 100mm-1200mm Mahomby isika amin'ny famolavolana alim-by ho an'ny mpanjifa. Ireo faribolana ireo.
Cookware Soft 1200 Round Aluminum Sheet 1000 Series Deep Spinning
Description: Isika dia iray amin'ireo mpamokatra tsara indrindra amin'ny alàlan'ny kalitaon'ny aluminium iraisam-pirenena izay ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany. Ireo faribolana ireo dia mandalo amin'ny fenitry ny fitsapana mafy mba hahazoana vokatra tsara indrindra. Aluminium Circle dia ampiasaina betsaka amin'ny electronics, kosmetika, fanafody, kolontsaina ary ny fampianarana ary ny ampahan'ny fiara. Electrical appliances, isolation, machinery fabrication, automobile, aerospace, military, mold, construction, printing and other industries. Toy ny fitaovana an-dakozia toy ny non-stick pan, fitaovana fanenomana sy ny vokatra hafa amin'ny fitaovana toy ny shade, shell heater, sns. Tena tsara vahaolana ny fahasimbana Fahavitrihana Ny fiainana lava Farany farany Aluminum Circles for Utensils Aluminium dia marefo ary hinged ...
Fitaovana mahery vaika 1070 saribao Aluminium 12.25 Inch x 1mm
Famaritana: Isika no anisan'ny iray amin'ireo mpanamboatra akora tsara indrindra avy any Chine. Maneho ny kalitaon'ny alimanina tsara Aluminium tsara vita amin'ny alimo madio. Ny fampiasana amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany, ny tarehimarika Aluminium natolotry antsika dia avo lenta amin'ny akora simika. Ny tanjaka sy ny faharetana dia ny toetra lehibe indrindra amin'ny Discs Aluminium Tsara izay mamporisika azy ireo amin'ny ankapobeny. Azo atao amin'ny alikaola, fitaovana fikarakarana sakafo, fonosana, poty, boiler ary fitaovana fandroana hafa ny alika tsara alimina. Firaka: 5005,5052,5754,5083. Tezitra: H14, O. Hateviny: 0.25-6.00mm. Ampidiro: 50-1200mm 1. Fihetseham-po sy tanjaka mahery vaika; 2. Ny fahombiazan'ny fitantanana dia tsara, mametaka, manamboatra ny haavony; 3. Fiatoana amin'ny alàlan'ny gazy, famolahana hydrogène, ...
Ny 5052 aluminium faribolana novokarin'ny Shuanglin Jiate no noraisin'ny CC & DC aluminium coils, hateviny isan-karazany avy any 0.25mm ho 6mm, savaivony avy 50mm ho 1200mm, firaka isan'ny 1050, 1060, 1100, 3003, 3004, 3105, 5052 tezitra H14, H24, H16 amin'ny H18, O, sns. Aluminium 1060 aluminio dia ampiasaina amin'ny dingan'ny fihodinana, spinning, sns., Dia afaka mamokatra vokatra toy ny fitaovana elektronika, fitaovana elektrika, lakolosy fanjelanjelatra LED. Inona ny endriky ny ala 5052 amin'ny alim-borona? Aoka ho afaka amin'ny alikaola, dent, fampidirana, scratches, tain-koditra, fanodinana oxide, fialana, korrosion, marika fingotra, loto ny loto ary fahalemena hafa izay hanelingelina ny fampiasana ...
Plain 1060 3003 H0 Aluminum Circle Blanks 1.0mm For Cookware Utensils
Description: Aluminium Circle ho an'ny mpampiasa mba hampidiran-dritra mangatsiaka ho an'ny karazana kapooka, kapoaka sy aluminium shell, Jinan Xinyi tabilao Aluminium Aluminium dia ampiasaina betsaka amin'ny electronics, kosmetika, fanafody, kolontsaina ary fanabeazana sy fiara mandeha amin'ny auto. Ny fitaovana elektrika, ny tsindrin-tsakafo, ny famokarana herinaratra, ny fiara, ny fiaramanidina, ny milina, ny biriky, ny fanorenana, ny fanaovana pirinty ary ny indostria hafa, dia mivarotra any amin'ireo faritany sy tanàna 31 manerana an'i Azia, Azia atsimo atsinanana, Eoropa ary Etazonia, Aostralia, mihoatra noho ny firenena 40 sy faritra . Shuanglin Jiate dia manasokajy amin'ny famokarana rakikiram-peo Aluminium avo lenta miaraka amin'ny haavony farafahakeliny farafahakeliny ary farafahakeliny farafahakeliny farafahakeliny azo ampiasaina amin'ny fampiasana amin'ny semiconductor, fanangonam-bozaka simika ...
Fitaovam-pitaterana Aluminium Multifunctional 1050 ho an'ny fitaovana
Description: Ny kodiaran-kodiaran-koditra vita amin'ny alim-bovona 1050 dia manana endrika tsara tarehy amin'ny sary mihetsika lalina, mitsambikina. Mampiasa ny 99.5% ny kitay vita amin'ny alimo isika mba hamokarana ny faribolan'ny alimo mba hahazoana ny kalitaon'ny alim-pandihantsika. Tianay ny manome ny mpiara-miombon'antoka tsara indrindra amin'ny faran'ny kalitao tsara indrindra sy ny fanompoana tsara indrindra. Manana traikefa isika amin'ny famokarana kodiarana alimina mandritra ny folo taona mahery miaraka amin'ny karazan'entana 200-300Tons isam-bolana. Ny tsena lehibe ho an'ny Aluminium Circle no Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana, Afrikana sy Atsimo. Ny faribolan'ny alim-bary dia tena mandray sy mahafeno fepetra ho an'ny mpanjifantsika rehetra.
Ny Stick Stick 3003 8011 Cookware Aluminum Circles Miaraka amin'ny Finishing Finishing Mill
Famaritana: Nifanaiky tamin'ny traikefa goavana nandritra ny taona maro izahay, dia efa nanolo-kevitra ny hanolotra sehatra goavana amin'ny alim-by Aluminium. Ireo faribolana ireo dia novokarina tamin'ny alim-pitondran'ny alàlan'ny alim-pahaizana malaza amin'ny alàlan'ny famolavolana tetikasa. Ireo faribolana ireo dia ampiasaina amin'ny fanaovana fitaovana an-dakozia, pizza pan, tsy misy penso, vilia sns ..., noho ny endriny fanamorana maivana sy haingana. Azo amidy amin'ny isam-bolana, ny halavany ary ny lamina, ireo alim-borona ireo dia azo alaina avy amintsika amin'ny tarehimarika. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Karazana karazana: 1 1050 1060 1070 3003 3004 3105. Temper: ...
Large Polishing Kitchen Utensils 1070 Round Aluminum Sheet Light Weight
Famaritana: Mahomby isika amin'ny famokarana kalitao Aluminium kalitao ho an'ny mpanjifa. Ireo faribolana dia mivoatra amin'ny fampiasana ireo fitaovana avo lenta sy teknika avo lenta. Ny aliman-koditra avo lenta antsoina hoe aluminium dia azo ampiasaina amin'ny famokarana varimbazaha varimbazaha isan-karazany, toy ny fanodinana zezika tapaka lalina, manatsara ny kalitaon'ny fitaovana ambioka, ho an'ny alim-bary tsy mofomamy tsy mafana, Ny kitapo vita amin'ny alim-bary dia misy karazana legioma isan-karazany, toy ny grady 3003, AA 1050, legioma 1070 A1050 O, AA 1100 3003 1060 1200 HO legioma, koa Misy AA3003 manintona ny kalitaon'ny kalitaon'ny kalitaona, ny legioma 3003 ...
Description: 1.Alloy 1060 Aluminium disc, ny kalisim-po lalina, ny kalitaony tsara, ny fanamafisana sy ny fanamafisana tsara, ny sofina efatra; 2.Excellent fitaratra, tsara ho an'ny polisy; 3.Good kalitao anodized, mety ho anodizing mafy sy ny eameling; 4.Olaingitra sy ravin-kisoa, tsara kalitao, voankazo tsara ary rehefa manisy lalotra tsy misy fefy; 5.Excellent pearl colour anodizing. Ny aliman-koditra avo lenta antsoina hoe aluminium dia azo ampiasaina amin'ny famokarana varimbazaha varimbazaha isan-karazany, toy ny fanodinana zezika tapaka lalina, manatsara ny kalitaon'ny fitaovana ambioka, ho an'ny alim-bary tsy mofomamy tsy mafana, tsy misy kitapo, tsy misy kitay, kitay sns ... sns ...
Famaritana: Toetoetran'ny alim-borona aluminio dia ampiasaina betsaka amin'ny serivisy, Fandefasana sari-tany momba ny làlam-pitaovana, Fandefasana banga. Aluminium no fitaovana mahazatra indrindra ho an'ny cookware, satria izy no mpanamboatra hafanana ary tsy misy vidiny raha oharina amin'ny varahina na vy. Na dia zava-dehibe aza ny singa toy ny departemanta, ny manasongadina sy ny vita, ny elanelana no singa manan-danja amin'ny kalitao. Ny latsa-dranomaso, ny tsara kokoa ny famaranana hafanana, dia mampihena ny fahafahan'ny "toerana mafana" mitranga. Tadidio, satria aluminium ny alimine rehetra, ny alim-bary dia miparitaka manerana ny faritra manontolo, ao anatin'izany ny rindrina amin'ny rindrina. Ny lovia fantsom-bozaka nentim-paharazana nentim-paharazana dia niparitaka tsikelikely ...
Tendrendra O 32 Inch 3003 Aluminium Disc Deep Spining For Cookware
Famaritana: Manolotra karazana Aluminium ho an'ny fitaovana ho an'ny mpanjifantsika isika. Ny vokatra azonay dia novolavolain-dry zareo matihanina amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta sy fitaovana tsara indrindra azo avy amin'ny mpivarotra azo itokisana. Noho ny fangatahana avo lenta, ny vokatra azonay dia misy amin'ny fomba maro samihafa. Manana safidy lehibe isika mba hanolorana amin'ny teny hoe Gauge sy Sizes amin'ny mpanjifa. Ireo faribolan'ny alim-bary natolotr'i antsika dia nampiasaina tamin'ny endriny madio ho an'i EG tao Hindalco. Ity sehatra ity dia ilaina ho an'ny Deep Draw, Anodizing & Hard Anodizing. Manolotra soso-kevitra mora ihany koa izahay, tratra mafy, Half-hard, Full hard Non anodize ...
Ny alimanakan'i Shuanglin Jiate dia manamboatra faribolana avo lenta amin'ny varotra sy ny hateviny isan-karazany, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. Ireo dia ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana an-trano toy ny fitaovana fanenomana, tsy fisakafoanana ary fitaovana fambolena hafa. Ireto ambany ireto ireo refy sy fepetra izay ahafahantsika manome faribolana 10 Years of Producing Aluminium ny vokatra dia manatsara ny kalitao ary avy hatrany dia ny fanentanana ny mpanjifa, ny kodiaran-alim-borona dia mety amin'ny kalitaon-tsarimihetsika ary ny fampiasana ny fantsom-pamokarana. Aluminio circle Specification: Legg: 1050, 1060, 1070, 3003, 5052, 3105, 6061 ny haavony: 0.15-8mm diamond: 20-1200mm Quick Detail: 1050 3003 ...
Taratasy aluminium vita amin'ny alimo vita amin'ny alim-bolana amin'ny alàlan'ny sary hosodoko tsy matevina
Description: Ny sokajin'ny Aluminium Circle, izahay dia mpanamboatra manokana avy any Chine, Aluminium Circle For Cookware, Aluminum Disc mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Cold Rolled aluminium Circle R & D sy ny orinasa, manana ny serivisy taorian'ny varotra isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo! Noho ny fangatahana avo lenta, ny vokatra azonay dia misy amin'ny fomba maro samihafa. Manana safidy lehibe isika mba hanolorana amin'ny teny hoe Gauge sy Sizes amin'ny mpanjifa. Ireo faribolan'ny alim-bary natolotr'i antsika dia nampiasaina tamin'ny endriny madio ho an'i EG tao Hindalco. Ity sehatra ity dia ilaina ho an'ny Deep Draw, Anodizing & Hard Anodizing. We also ...
1. Aluminium circle Specification: Legge: 1050, 1060, 1070, 3003, 5052, 3105, 6061 dia matevina: 0.15-8mm diamond: 20-1200mm 2. Aluminium circle Fampiharana sy fampiasana: alim-bovoka Tolotrana: tolotr'asa fahamalinana +/- 3%, tolotr'aretina +/- 1% mm Fonon-tsakafo maitso, spinning cookware, famantarana famantarana, trano fanorenana, fanala, sy ny sisa. 3. Ny kalitaon'ny alim-bary dia tsara ho an'ny kalitaon'ny alikaola: ho afaka amin'ny alikaola, dendrina, fampidiran-danja, scratches, tainkintana, famokarana alikaida, fanotanam-pandehanana, korrosion, marika roapolo, alon-driaka sy kilema hafa izay hanelingelina ny fampiasana, 4. Ny alim-bary aluminium aluminium: Ny fambolena fambolena sy fiompiana matanjaka dia mety hahafeno ny fepetra takian'ny GB / T, ASTM, ENAW, JIS Standard 5. Aluminum circle Packing: Voalohany, lamba plastika ...
DC / CC 1050 Fonosana sarobidy alim-borona misy alim-borona ho an'ny fitaovana fanenon-jiro amin'ny alimo
Famaritana: Ny toetoetran'ny alim-bary (aluminium) ho an'ny vilany, pardonnera, ala tsy misy kofehy (na endrika boribory) dia mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny fampiasana amin'ny tsenambola maromaro ao anatin'izany ny sehatry ny cookie, automotive and lighting etc: 1. Anisotropy ambany, izay manamora ny famolavolana lalina ny 2. Fiarovana mahery vaika 3. Hery sy hafanam-po hafahafa 4. Ny fahafahana mamirapiratra, rakotry ny PTFE (na hafa), anodized 5. Good reflectivity 6. Fiarovana mahery vaika amin'ny 7. Faharetana sy fanoherana amin'ny fahasimbana Quick Detail: Deep Drawing Cookware Aluminium Disc Leg: 1050 1060 1100 1200 3003. Fahavetavetana: 0.3mm mankany 6.0mm, ankapobeny 0.5mm mankany 4.5mm Diameter: 50mm mankany 1600mm, ...
Alim-borona tsara tarehy Aluminium / Aluminium tsara ho an'ny fitaovana sy ny fitaovam-pisiana
Ny alim-borona alimina alimina Production Standard: araka ny fenitra iraisam-pirenena ASTM OR EN standard All chemical compostion, ny fananana ara-mekanika, ny fandeferana ny halavany, ny tolotr'andriampahalemana snSt, araka ny ASTM OR EN standard. Ny fikarakarana ara-tsimia: alim-borona: alikaola, fitaovana kitotila, tavoahangy, mofomamy, marika famantarana / varotra) sns. Fahazoana antoka tsara: Manana rafitra fanaraha-maso hentitra avy amin'ny alaola vita amin'ny alimo izahay mba hamaranana ireo vokatra alimo. ho an'ny mpanjifa. ary ny dingana famokarana dia atao avy amin'ny SGS, BV Nahoana no misafidy antsika: 1. Mpanamboatra fanamarinana: Isika 10 taona nohavaozina ny mpikambana volamena ao anatin'ny chine ary nanamarina ihany koa ...